လူသားချင်းစာနာရေး အကူအညီ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့ EU တိုက်တွန်း အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို လူသားချင်းစာနာရေး အဖွဲ့တွေက အကူအညီ ဆက်လက်ပေးခွင့်ပြုဖို့ EU ဥရောပကော်မရှင်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို မနေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး မဟာမင်းကြီး Ms. Kristalina Georgieva
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ ဒုက္ခသည်တွေကို ဆက်လက်နှင်ထုတ်နေပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က နယ်စပ်ဒေသမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့သုံးခုကို လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး မဟာမင်းကြီး Ms. Georgieva က ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူး စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရဟာ တာဝန်သိသိ ဆောင်ရွက်ဖို့ အထူးတလည် မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် လိုအပ်နေသူတွေ အားလုံးကို အကူအညီပေးဖို့နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေကိုလည်း အားလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ့် လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း သူ့ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် လူနေအိမ်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ ကလေးမြို့ပြည်သူ သမ္မတသဘောထား ထောက်ခံ ဆန္ဒပြ
EU, OIC and other Muslim Nations, do not just donate the money, please take Bangali Rohingas to your countries. These people are belongs to Bengaladesh, so Burma should not be shoulder any resonsibilities. We allow them to live in our land for centuries. Now it is time for you all to take these stateless people. Give us to live in peace in our Burma.
Aug 12, 2012 10:18 AM